I-Snapdragon 675: iprosesa entsha yaphakathi kwinqanaba lefemu ilapha | I-Androidsis
I-Snapdragon 675: iprosesa entsha yaphakathi kuluhlu lwenkampani ilapha
Emva kwenkcazo Snapdragon 670 y 710, Amaqonga amabini abe yinxalenye yeefowuni eziphakathi zoluhlu oluphakathi kwintengiso, iQualcomm ine-chipset entsha ekulungeleyo, ebekwe njengokuphuculwa okuncinci kokukhankanyiweyo. Sithetha nge-Snapdragon 675.
Eli lungu litsha losapho lwenkampani yaseMelika lenzelwe iifowuni midlalo, ke amandla ayibonisayo aya kwanela ukuba phakathi kwiifowuni eziphakathi premium. Isinika ntoni le chipset?
I-Snapdragon 675 yakhiwe phantsi kwenkqubo ye-11nm, ngokungafaniyo ne-SD670, eza nge-10nm. Nangona kunjalo, kungcono, kuba ine-cores ezisibhozo ezipakishwe, kuzo zonke i-Kyro. Ngokukodwa, inezinto ezimbini zokwenza umsebenzi ophakamileyo kwi-2.0 GHz kunye nesithandathu sokusebenza ngokufanelekileyo kwi-1.7 GHz frequency.
NjengeGPU, I-chipset iyakonwabela ukusebenzisana kwesizukulwana sesithandathu iAdreno 615, Esona sizathu siphambili sokuba iNkqubo-kwi-Chip yenzelwe ukuba ingene ngaphakathi kwiselfowuni abadlali. Le processor yemizobo ixhasa inkxaso ye-OpenGL ES 3.2, i-Open CL 2.0, iVulkan kunye ne-DirectX 12, amanqaku angenakusilela xa udlala imidlalo enomdla kakhulu.
Ngokwahlukileyo, iQualcomm ithi I-SD675 ihambisa ukuya kuthi ga kwi-20% yokusebenza okuphezulu kumculo, I-30% yokudlala ngokukhawuleza, i-35% yokukhangela ngokukhawuleza kwiwebhu, kunye nokunyuka okupheleleyo kwe-15% kwimidiya yoluntu, ngaphezulu kwe-Snapdragon 670 esandula ukubhengezwa.
Okokugqibela, i-SoC ibandakanya imodem yeX12 LTE ngesantya sokukhuphela ukuya kuthi ga kwi-600MB / s, inkxaso ye-Wi-Fi 802.11 ac 2x2 ene-MU-MIMO kunye neBluetooth 5.0. Ikwaxhasa itekhnoloji ekhawulezayo yenkampani ekhawulezayo ye-4 + ekhawulezayo, ekwaziyo ukurekhoda ividiyo eshukumayo ehamba kancinci ifikelela kwizakhelo ezingama-480 ngomzuzwana kwi-HD, ixhasa izikrini eziphezulu ze-FHD +, iyahambelana neekhamera ezintathu zangasemva kwaye ixhasa abenzi boluvo ukuya kuthi ga kwi-25 MP, Nangona Ayizukude kude kube ngunyaka olandelayo ukuba ndibonakalise zonke ezi zinto zibalulekileyo kwizixhobo zokuqala ukubetha emarikeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 675: iprosesa entsha yaphakathi kuluhlu lwenkampani ilapha
UXiaomi usungula ngokusesikweni iBlack Shark Helo, ifowuni entsha yokudlala ene-10 GB ye-RAM
Olunye ukhetho kwi-Inbox kaGoogle